Monday November 16, 2020 - 11:30:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maalin walba waxaa gudaha Suudaan barakac ku taga illaa 4000 oo ruux waxaana lasaadaalinayaa in dadka barakacayaasha ah ee ucararay suudaan ay gaaraan 220 kun oo ruux sida ay sheegeen saraakiil katirsan waxa loogu yeero q.midoobay.
Wakaaladda wararka rasmiga Suudaan ayaa sheegtay in gobollada Kasala iyo Alghadaariif ay tageen dad gaaraya 24 kun oo ruux walina ay barakacayaashu wadada kujiraan.
Dadka qaar oo awoodi waayay in ay soo raacaan gaadiid ayaa cagahooda malaya waxayna xuduudda kasoo gudbayaan iyagoo haraaadsan oo aad ugaajaysan.
dadka Xabashida barakacayaasha ah waxay ka sheekeeyeen dhacdooyin yaab leh oo ay kusoo arkeen jiidaha dagaalka halkaas oo ay hubka waaweyn isku weydaarsanayaan dagaalyahannada jabhadda tigreega TPLF iyo ciidamada dowladda itoobiya ee Abiy Axmed madaxda uyahay.
Cabdalla Suleymaan oo ah madaxa arrimaha qaxootiga xukuumadda suudaan ayaa sheegay in diiwaan gelinta barakacayaasha itoobiyaanka ay waqti badan qaadanayso sababa laxiriira duruufahooda nololeed oo aad u adag.
Meelaha ay dadku kasoo barakacayaan ma ahan oo kaliya gobolka Tigray ee ay dirirta xooggan ka socoto ee waxay ka imaanayaan dhanka gobolka Amxaarada oo dagaalladu ay saameeyeen.
dadka kasoo firxanaya dagaalka aad sare ugu kacay tusaale ahaan khamistii ayaa ladiiwaan geliyay dad gaaraya 11 kun oo ruux balse gelinkii hore ee axaddii ayay tiradu gaartay 24,944 ruux.
Xukuumadda Alkhurduum waxay walaac ka muujinaysaa qulqulka qaxootiga oo aysan awood ulaheyn in ay qaabisho oo ay maarayso waxayna ugu baaqday waxa loogu yeero Q.midoobay iyo dowladaha reergalbeedka ee taageera itoobiya in ay xaaladda soo farageliyaan oo ay wax uqabtaan barakacayaasha.